Warar - Farqiga u dhexeeya funaanad iyo funaanad
Farqiga u dhexeeya funaanad iyo funaanad
Fikrad ahaan funaanadku waa nooc ka mid ah funaanadaha la tolo. Knitwear waa fikrad ballaadhan. Dharka dharka ayaa loo qaybin karaa dharka suufka ah iyo dharka dhogorta, iyo funaanadaha ayaa ka mid ah dharka dhogorta. Dharka la isku tolay ee aynu inta badan tixraacno waxaynu tixraacnaa dhar tolmo leh oo lagu tolay qalabka tolida. Dusha sare runti waa buur dhogor dhogor ah oo dharka dhogorta leh marka la eego hababka wax lagu farsameeyo isku mid ma ahan, dhididka suufka lagu tolay ee soo saarista tignoolajiyada jarista iyo tolidda. Dharka dhogorta leh ee dhogorta leh ma sameeyo. Dharka ayaa lagu tolay iyada oo la marinayo maqaarka. Dharka funaanadaha aan inta badan ka hadalno ayaa u badan dharka lagu xardhay dunta dhogorta ka samaysan, iyo funaanadaha la isku tolay ayaa ah fikrad aad u xirfadeed oo farsamada gacanta ah. Guud ahaan, dharka hoosta, dharka isboortiga suufka, sharaabaadyada, iwm ayaa loo qaadan karaa inay yihiin tolnimo.
Dharka dharka lagu tolo ayaa badanaa hodan ku ah dharbaaxada iyo saamaynta jidhka. Sanadihii la soo dhaafay, isku darka caanka ah ee loo yaqaan 'cardigan mix iyo match' ayaa aad ugu habboon gabdhaha da'da yar. Xulo funaanad midab adag leh oo leh dhar gaagaaban iyo lebbiska midabada nacnaca leh ee kabaha Martin. Dhar aad u qurux badan, goonnada dharka waa inaysan dheereyn. Xilliga cimilada qabow, sidoo kale waa xulasho wanaagsan in la doorto kabo baraf duuban. Isku darkaani waa mid moodada, cusub, galmo iyo qurux badan.
Dareenka dabacsan iyo midka aan caadiga ahayn ee funaanadaha la tolay, sida jaakad, ayaa si fiican u muujin kara qaabka Yurub iyo Ameerika. Haddii aad xirato dusha sare oo dhuuban, dharka gaaban ee denim ayaa ku dari doona xoogaa firiiric ah. Sharafta bunni iyo jaakad tolmo leh oo goonni ah ayaa kaa dhigaysa mid galmo badan oo soo jiidasho leh. Saamaynta ugu dhow ee dharka ayaa ka dhigi kara naasahaaga iyo miskaha inay u muuqdaan kuwo buuxa, halka sharabaadada madow ay iska fidinayaan oo ay yareeyaan khadadka lugtaada Soo jiidashada dumarka ayaa si aad ah loo muujiyey. Haddii aad xirato jaakad tolmo leh, kuma aad fiicnid inaad siisid dhar culus oo lebbis ah. Hadda maro yar oo laba jibbaaran ayaa qoorta looga xidhay, taas oo moodada iyo deeqsinimada leh.